व्यवसाय कार्ड विचार र प्रेरणा - Print Peppermint
व्यवसाय कार्ड विचार र प्रेरणा
डिजाइन ब्लग / व्यवसाय कार्ड विचार र प्रेरणा
डिजाइनरहरूको ब्लक? के तपाईं अडिनुभयो र तपाईंको व्यापार कार्ड डिजाईन गर्न कसरी सुरू गर्ने थाहा छैन। कहिलेकाँही तपाईंलाई थोरै प्रेरणा चाहिन्छ। एकचोटि बुझ्नुभयो भने व्यापार कार्डको आधारभूत, यो विचार स्पार्क गर्न अन्य डिजाइनरहरूको व्यापार कार्डहरू हेर्नको लागि यसले मद्दत पुर्‍याउँछ। तल तपाईले हाम्रा ग्राहकहरुबाट भर्खरको सम्पन्न परियोजनाहरुमा २०० भन्दा बढी लेख पाउनुहुनेछ। केही परियोजनाहरूमा, हामी ह्यान्डल गर्यौं डिजाइन र प्रिन्टि,, केवल अरूमा प्रिन्ट उत्पादन। तपाईलाई जाँच गरेर पनि प्रेरित हुन सक्नुहुन्छ ग्राफिक डिजाइन र लोगो डिजाइन हाम्रो ब्लग को वर्गहरु।
भर्खरको व्यवसाय कार्ड विचार र प्रेरणा लेख
चिकित्सा पेशेवरहरूको लागि उत्तम व्यापार कार्डहरू
यो एक ज्ञात तथ्य हो कि एक ब्यापार कार्डले व्यक्ति वा कम्पनीमा ठूलो अन्तरदृष्टि प्रदान गर्न सक्दछ। रंग, फन्ट, पign्क्तिबद्धता, र ग्राफिक्स को छनोट को मालिक मालिक नक्कल गर्न कोशिस गर्दै छ कि ब्रान्ड पहिचान को बारे मा धेरै भन्छ। सबै पेशेवर जस्तै, डाक्टरहरूले पनि नेतृत्व कार्ड उत्पादन कार्डको आवश्यक पर्दछ। को लागि ... थप पढ्नुहोस्
११ डिजाइन लेआउटहरू जुन तपाईंको ब्यापार कार्डहरू उत्कृष्ट देखाउनको लागि ग्यारेन्टी गरिएको छ
डिजिटल युगमा जहाँ सबै चीज एकल उपकरणमा प्याकेज गरिएको छ, एड-अनहरू बोक्न अलि अनावश्यक देखिन्छ। व्यापार कार्ड, तथापि, त्यो धारणाको अपवाद हो। वास्तवमा तपाईको व्यवसाय कार्ड एक चीज हो जुन पछिल्लो टेक्नोलोजी भन्दा बढी सुविधाजनक छ। जब तपाईं नयाँ सम्भावित ग्राहक वा व्यवसाय भेट्नुहुन्छ ... थप पढ्नुहोस्
व्यवसाय कार्ड विचार र प्रेरणा / ग्राफिक डिजाइन
व्यवसाय कार्ड लेआउट प्रेरणाको लागि ११ महान डिजाइनहरू
अप्रभावी रूपमा योजना गरिएको व्यापार कार्डहरूको ओसारसिटेसनको साथ, यो सामान्य अराजकतामा तपाईंको गलत ठाउँमा राख्नु एकदम स्वाभाविक हो, विशेष गरी यो घटनामा जुन तपाईंले यसलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको व्यक्तिसँग अविश्वसनीय पहिलो जडान स्थापना गर्न बेवास्ता गर्दछ। अफ मौकामा कि यो उम्कने उत्तम अवसर हो ... थप पढ्नुहोस्
महिलाका लागि व्यवसाय कार्ड होल्डरहरू, हाम्रो F फ्याभहरू!
अब जब तपाइँसँग तपाइँको सिर्जनात्मक नयाँ व्यापार कार्डहरू छन् तपाइँले कतै भण्डार गर्न आवश्यक छ कि ती बेन्ट हुनेछैनन्। जबकि तपाईको वालेटमा केहि ब्याकअप राख्नुपर्दछ, एक समर्पित कार्ड होल्डर नेटवर्कि events कार्यक्रमहरूमा अधिक पहुँचयोग्य हुन्छ। यहाँ महिलाका लागि best उत्तम व्यवसाय कार्ड होल्डरहरू छन्। Kate Spade न्यूयोर्क KS… थप पढ्नुहोस्
व्यवसाय कार्ड विचार र प्रेरणा / प्रसिद्ध ब्रान्डहरू
छाप्नको लागि मुद्रित: पन्नी व्यवसाय कार्डहरूको हप्ते
द्रुत तपाईंको वालेट खोल्नुहोस् कति सादा, कागज व्यवसाय कार्डहरू तपाईंले पछाडि जाम गर्नुभयो? अरूको बारेमा के हुन्छ जसले तपाईंको फोहरबास्केटको तल अधिक अप्रिय अन्त भेट्टाए? वास्तविकता यो हो कि जब उनीहरू आधारभूत उद्देश्यका लागि सेवा गर्दछन्, यी हातहत ध्यान केन्द्रित गर्नेहरू केहि पनि हुनुपर्दछ। जब तपाईं बाट टाढा जान चाहनुहुन्छ ... थप पढ्नुहोस्
व्यापार कार्ड आधारभूत / व्यवसाय कार्ड विचार र प्रेरणा / मुद्रण
शीर्ष १० मनपर्ने "प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड"
के तपाई ब्यापार मालिक हुनुहुन्छ? के तपाईसँग ब्यापार कार्ड छ? यदि तपाईं माथिका प्रश्नहरूको लागि "हो" भनिरहनु भएको छ भने, यहाँ सोच्नुहोस् - तपाईंको व्यवसाय कार्डले प्रभाव पार्दछ? के व्यक्तिले तपाईंको कार्डमा दोस्रो हेराइ लिन्छन् वा उनीहरूले तत्काल यसलाई आफ्नो जेबमा हान्छन्? ठिक छ, व्यापार कार्ड संग शक्ति छ… थप पढ्नुहोस्